Virtual Reality (VR) porn ကော။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
အဘယ်အရာကို Virtual Reality နှင့် ပတ်သက်. (VR) porn?
နောက်ဆုံးအခြေအနေ - ၂၀၁၈ တစ်ဦးက virtual reality လေ့လာမှု: ညစ်ညမ်းများ၏အမြင်အပေါ်နှစ်မြှုပ်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု
ရလဒ်များ VR နည်းပညာကနေတဆင့်ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုအားပစ္စည်းကြည့်ရှုနေတဲ့ psychophysiological တုံ့ပြန်မှုအပေါ်ပိုမိုအားကောင်းသက်ရောက်မှုအဖြစ်သမားရိုးကျ desktop ကို display ကို အသုံးပြု. ထက်ပုဂ္ဂလဒိဋ္အတွေ့အကြုံကိုခဲ့ကြောင်းပြသခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးအခြေအနေ - ၂၀၁၈ လိင်စိတ်နိုးထနှင့်ရှိနေခြင်းအပေါ် 2D ညစ်ညမ်းနှိုင်းယှဉ် virtual reality ၏သက်ရောက်မှု
ယောက်ျားများသည်ယေဘုယျအားဖြင့် 2D အပြာစာပေရုပ်ပုံနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းအားလိင်ဆက်ဆံခြင်းအားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုကိုပြသခဲ့ကြသော်လည်းအမျိုးသမီးများကမူမတွေ့ရှိခဲ့ပါ။ ... [သို့သော်] ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအရာများနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သည့်အခါပုံမှန်အားဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများထက် VR သည်အမျိုးသမီးများအတွက် VR ကိုပိုမိုနှိုးဆွပေးနိုင်သည်။ ... [တွေ့ကြုံမှု] နှင့်လိင်မှုနှိုးဆွမှုသည် VR အတွက် 2D ပစ္စည်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်သည်။ … VR သည်အချို့သောပါဝင်သောအရာများအထူးသဖြင့်အမျိုးသားများအပေါ်သက်ရောက်မှုကိုပိုမိုမြင့်တက်စေနိုင်သည်။ …ရေတိုတွင် VR ၏အသစ်အဆန်းသည်အတင်းအကျပ်စားသုံးမှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
ဒါ့အပြင်တွေ့မြင် virtual reality ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏အမှန်တရား
သို့သျောလညျး porn စက်မှုလုပ်ငန်းပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအဖြစ် VR porn မွှမ်းတင် ကုထုံး။ ဥပမာအားဖြင့်၊ VR porn သည်“ ကြည့်ရှုခြင်း၊80% ကုထုံး, 20% ဖျော်ဖြေရေး။ " သို့သော်ယင်းသည်မှန်ပါသလော။ ယခုအချိန်အထိထိုကဲ့သို့သောပြောဆိုချက်များအတွက်သက်သေအထောက်အထားမရှိသေးပါ။ အထက်ဖော်ပြပါသုတေသီများကပြန်လည်နာလန်ထူရေးဖိုရမ်များနှင့်ပတ်သက်သည့်မှတ်ချက်များသည်အခြားမဟုတ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
ကျွန်ုပ်အသက် ၄၂ နှစ်ရှိပြီးကျွန်ုပ်သည် ၁၂ နှစ်အရွယ် မှစ၍ နေ့တိုင်း PMO'er ဖြစ်နေသည်။ ကျွန်ုပ်သည် PIED နှင့်တစ်ခါမျှပြtroubleနာမရှိခဲ့ပါ။ ငါ VR porn ကိုလအနည်းငယ်ထိတွေ့ခဲ့ပြီးငါ့အတွက်နေ့စဉ်အရာတော့မဟုတ်ခဲ့ဘူး။ ငါတစ်လလျှင်နှစ်ကြိမ်အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မယ် ဒါပေမယ့် ကန့်သတ်ထိတွေ့ PIED နှင့်အတူအချို့သောပြဿနာများဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည့်. မတန်ဘူး။ ထိုဆောင်းပါးကို တင်ပေးသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ငါ အဲဒါကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ သဘောတူတယ်။
ငါ [Virtual Reality porn] ကိုပိုပြီးစွဲလမ်းစေတာကိုတွေ့လိုက်ပြီး Virtual Reality ဟာပိုကောင်းလာမယ်၊ Porn စတူဒီယိုတွေက VR porn ကိုထုတ်လုပ်ရာမှာပိုကောင်းလာပြီးပိုကောင်းလာမယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လာတယ် ပိုကောင်းဖြစ်နိုင်ယခုငါထွက်ရ။
ကျွန်ုပ်သည် VR (အစောပိုင်း ၂၀၁၄ နွေရာသီတွင် Oculus DK2) ကိုမွေးစားခဲ့သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ခါးပတ်အောက်တွင် VR ညစ်ညမ်းမှုကို ၁ နှစ်ခွဲနီးပါးကြာခဲ့ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်းစတူဒီယိုများပေါ်သို့တက်လာပြီးအရာရာသည်အမှန်တကယ်ချွတ်ယွင်းလာခဲ့သည်။ ရလဒ်အဖြစ်ငါ၏အစွဲ။ မကြာခင်မှာပဲကျွန်တော့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဆိုက်များကိုငွေပေးချေရတော့မယ်၊ အဲဒါကို torrenting လုပ်မယ့်အစား၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ torrents ရရှိနိုင်မယ့်အချိန်ကိုမစောင့်ချင်လို့ပါ။
VR Porn im အကူအညီမဲ့
ဒီနေ့ဟာငါကြုံခဲ့ဖူးသမျှထဲမှာအဆိုးဝါးဆုံးနေ့ပါ။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ရက်ကကျွန်ုပ်၏ VR ကိုကျွန်ုပ်ထံပေးပို့ခဲ့ပြီးထို အချိန်မှစ၍ ကျွန်ုပ်ဘဝသည်ပြိုကွဲခဲ့သည်။ ငါ VR နားကြပ်နှင့်တစ်နေ့လျှင် ၅-၈ ကြိမ်လောက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည်။ ကျွန်ုပ်သည် porn နှင့်ကြည့်သောအခါအလွန်စွဲမှတ်ဖွယ်ကောင်းသည်။ ငါလုံးဝရူးသွပ်ပြီးအမျိုးသမီးများအတွက်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကျွန်ုပ်ကြည့်ရှုသည်။ ကျွန်ုပ်သည်မျက်လုံးများမှအမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုတောင်မကြည့်နိုင်သည့်အခြေအနေသို့ရောက်နေပြန်သည်။ ငါအမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုတွေ့သောအခါငါစဉ်းစားတစ်ခုတည်းသောအရာ, "shit ငါ့ကိုသင့်ရဲ့ TITS" ကဲ့သို့ shit ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီးကူညီပေးပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ဤကဲ့သို့သောဖြစ်ချင်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ပါ။ ငါ့ကိုကူညီနိုင်မယ့်သူရှိလား။ ကျေးဇူးပြု။ ငါကဂိမ်းနှင့်ဗီဒီယိုများနှင့် shit များအတွက်အသုံးပြုသည်။ ဒါကငါဝယ်တဲ့အခါငါစဉ်းစားတစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုအခါငါ VR porn အကြောင်းတစ်ခုခုကြားသိနှင့်ဤအရာအလုံးစုံတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာ…
အခုလက်ရှိ virtual reality ကုန်စည်ပြပွဲမှာလုပ်နေတယ်။ virtual reality porn ကိုပထမဆုံးအကြိမ်စမ်းသပ်ခဲ့တယ်။ ဒါကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ရှုရာမှာအဓိကကျတဲ့နည်းလမ်းမဖြစ်လာခင်ဒီစွဲလမ်းမှုမှလွတ်မြောက်ခဲ့လို့ဝမ်းသာပါတယ်။ ငါ့မှာ vr ရှိခဲ့ရင်ငါနင်ဆေးလိပ်ဖြတ်နိုင်မလားမသိဘူး။ ငါ့ကိုယုံကြည်ပါ VR porn သည်ပေါက်ကွဲတော့မည်ဖြစ်ပြီးလာမည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း VR မျက်နှာဖုံးများကိုပိုင်ဆိုင်သောဆယ်ကျော်သက်များသည်သားကောင်များဖြစ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်လူသားများကိုညစ်ညမ်းမှုမှလွတ်မြောက်စေရန်မှောင်မိုက်သောကာလ၏အစဖြစ်သည်။ သင်သည် porn မှထွက်ရန်ကြိုးစားနေပါက VR မျက်နှာဖုံးများကိုမဝယ်ပါနှင့်။
3D ဖြစ်တာကြောင့်အခန်းတစ်ခန်းလုံးမှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုမြင်နိုင်ဖို့စက်ဝိုင်းတွေ၊ ခြေရာတွေနဲ့လိုက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ နည်းပညာကအရမ်းကိုထူးခြားတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံရုပ်ပုံအရည်အသွေးသည်အမြဲတမ်းမရှင်းမလင်းဖြစ်တတ်ပြီးပုံမှန် porn နှင့်တူသည့် VR porn ကိုသင်ကလစ် နှိပ်၍ မရပါ။ ညစ်ပတ်ညစ်ပတ်စိတ်ကိုမကြိုက်သည့်တစ်မိနစ်သာကြာလျှင်ပင်၊ တည်ဆောက်ရန်အချိန်ကုန်ရသည်။ ငါဝမ်းနည်းစွာ, ဒီနှစ်အစောပိုင်းကဒီကြိုးစားခဲ့ တစ်ပါတ်အကြာမှာကျွန်မ VR နားကြပ်ကိုဖမ်းလိုက်တယ်။ ပုံမှန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာကကျွန်တော့်ကိုညစ်ညမ်းစေတယ်၊ ​​စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့်ဇနီးကိုလှည့်စားနေသလိုခံစားရတယ် VR ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာနဲ့ငါတကယ်ခံစားခဲ့ရတယ်။ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး, ငါ့ကိုကြောက်လန့် ဒါတွေအားလုံးဟာနုပျိုလန်းဆန်းနေဆဲပါ။ နှစ်နှစ်၊ သုံးနှစ်လောက်ပေးပါ၊ ဒါကတော်တော်လေးအဓိကလမ်းကြောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကဂျိုးရိုဂန်ကထိုအရာကိုကြည့်ပြီး“ မေ့လိုက်ပါ၊ မလုပ်ပါနဲ့။ ဒါကအက်ကွဲတာနဲ့တူတယ်၊ ဘယ်တော့မှထွက်မှာမဟုတ်ဘူး။ ”
ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့ကြီးပြင်းလာရမယ့်နောက်မျိုးဆက်အတွက်ငါကြောက်တယ်။ ပုံမှန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်အလွန်စားသုံးနေပါက VR porn သည် ဦး နှောက်ကိုမည်သို့ပြုလုပ်နိုင်သည်ကိုသာငါစိတ်ကူးနိုင်သည်။ တောက်ပသောဘက်တွင်မူ VR ညစ်ညမ်းရုပ်၏စွဲလမ်းနိုင်စွမ်းသည်လူများအားနောက်ဆုံးတွင်ညစ်ညမ်းသောအလွဲသုံးစားမှု / စွဲလမ်းမှုအန္တရာယ်များကိုသိမြင်စေလိမ့်မည်။ ထောက်ပံ့မှုများကိုရပ်ရွာလူထုများတိုးပွားလာလိမ့်မည်။
ပြည်သူ့ကကျော် gushing နေကြသည်။ ညစ်ညမ်းမှုကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့်တားမြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်တားဆီးခြင်းသည်အံ့ဖွယ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ၎င်းသည်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ပြ,နာမဟုတ်တော့ဘဲကျန်းမာရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပြissueနာဖြစ်သည်။
ငါသည်ငါ့ PSVR များအတွက်အချို့သော VR porn ကြိုးစားခဲ့ငါပြောရန်ရှိသည် ... [ဒါဟာဖြစ်ခဲ့သည်] ကိုလည်းအလွန်စိတ်ပျက်စရာ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိန်းကလေးကခင်ဗျားနဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့အချိန်မှာမင်းကသူ့ကိုတကယ်ထိတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒါကျွန်တော့်ကိုဒေါသဖြစ်စေတယ် ၎င်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများဖြင့်ကြည့်ရှုသောမိတ်ဆွေဖြစ်ခြင်းနှင့်တူသည်။
ဒီ shit ကိုတိုက်ထုတ်ဖို့ငါတို့တကယ်လုပ်ရလိမ့်မယ်။ vr porn လောကတွင်ကြီးပြင်းလာနေသောကလေးများသည်ငရဲသို့သွားရတော့မည်။ ဒီညစ်ညမ်းကြီးကြပ်သူတွေကငွေတွေများများရလာလိမ့်မယ်။ ၎င်းတို့သည်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဖြစ်သည်။ စည်တွင်းရှိငါးများ။ ဤလောကသည်လည်းငါတို့နှင့်စပ်ဆိုင်၏။ နောင်လာမည့်မျိုးဆက်သစ်များကိုကူညီရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အသိပညာ၊ အတွေ့အကြုံနှင့်နည်းလမ်းများပါသူများ။ ငါတို့ တတျနိုငျသ သောမျိုးဆက်ဖြစ် ကြီးစွန်း porn, ငါတို့သံသယမရှိဘဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းအင်အတူတကွလျှင်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းစကားကို pixel tits အစုတစ်ခုကဲ့သို့ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြပါကနောက်မျိုးဆက်မျိုးဆက် MEN အားတိုက်ခိုက်ရန်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပေးလိမ့်မည်။
ဒါဟာဖြစ်ကောင်းလူဦးရေလျှော့ချ၏အစီအစဉ်အစေခံပါလိမ့်မယ်။ အဘယ်ကြောင့် VR ယူပြီးနှောငျ့ယှကျအဖြစ်မှန်နှင့်အတူစိတ်ပျက်ခံရဖို့ကိုချွတ် mask? ညံ့ဖျင်းသောလေးတွေ။ ငါသည်ငါ၏လူငယ်အတွက်ညစ်ညမ်းထိုသို့ format နဲ့ကျန်းမာသန်စွမ်းခဲ့မဟုတ်ကြောင်း, တစ်ဦးစျေးကြီးမဂ္ဂဇင်းခဲ့ပေမယ့်သေချာပေါက်ချထားရန်ပိုမိုလွယ်ကူနိုင်အောင်ကံကောင်းဖြစ်၏။
ငါရှိသောကြောင့် VR porn ၏အနာဂတ်သားစဉ်မြေးဆက်များအတွက်စိတ်မကောင်းခံစားရပါတယ်
VR porn ကိုသင်ဘယ်တော့မှမစမ်းဖူးဘူးဆိုရင်၊ နာရီရာပေါင်းများစွာကနေအခမဲ့ဗီဒီယိုများနှင့်နမူနာနာရီများပါရှိသည့် Gear VR အတွက် app တစ်ခုရှိသည်။ ဤပစ္စည်းပစ္စယသည် dopamine အလုအယက်နောက်အဆင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မင်းကအဲဒီမှာရှိနေသလိုမျိုး၊ မင်းကအမျိုးသမီးတွေကိုထိတွေ့နိုင်ပြီးထိတွေ့နိုင်သလိုခံစားရတယ် ဒါကဒီနည်းပညာ၏အစောပိုင်းကာလတွေပါ။ ဒါဟာသာဒီကနေပိုပြီးစွဲလမ်းရမယ့်။ ဒါဟာရှိနေခြင်းခံစားရရန်၎င်း၏စွမ်းရည်အတွက်မျှမျှတတရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ပါပဲ။ အချို့လူများကဤနှိုးဆွမှုအဆင့်ကိုကိုင်တွယ်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်သေချာပါသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ထိုအရာများထဲမှတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ Flat screen porn သည် ED ကိုဖြစ်စေသည်ဆိုလျှင် VR porn သည်စွဲငြိဖွယ်ရာများသောအားဖြင့်ထပ်တူထပ်တူပြုနိုင်သည်။ ငါဒါကိုအသက် ၁၃ နှစ်မှာရမယ်ဆိုရင်ကြောက်စရာမကောင်းဘူး။
ဗွီဒီယိုများ၏အရည်အသွေးသည်အနည်းငယ်ကွာခြားသော်လည်းအများစုမှာအလွန်စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသည်။ ငါကြိုးစားခဲ့တုန်းကလအနည်းငယ်မှာညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းမှုကိုမကြည့်ခဲ့ဘူး၊ ငါ့ ဦး နှောက်ထဲမှာလျှပ်စစ်မီးတွေခံစားရသလိုငါ့နှလုံးကအရမ်းမြန်လွန်းတယ်၊ အရမ်းရယ်ရတယ်၊ ညစ်ညမ်းတဲ့ပုံကိုပုံမှန်ကြည့်တဲ့သူတွေကတော့ဒီလိုမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူး ပြင်းထန်တဲ့တုန့်ပြန်မှုရှိပေမယ့်ငါထင်ထားတာကသူတို့လုပ်ခဲ့တာတွေထက်ပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်
Black ကကြေးမုံ S5-E1
ငါ VR နဲ့စတင်ပြီးတာနဲ့ငါကသိပ်ဝေးလွန်းသိတယ်။ ဒါဟာထိုးတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ယခင်ဆေးရုံသို့ပြန်သွားနိုင်ဖြစ်ခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ငါသာပုံမှန် P ကိုမကြည့်နိုင်ဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကတခြားသူကိုကြည့်နေသလိုခံစားရတယ်၊ VR ကအဲဒီမှာငါလုပ်နေသလိုပဲ၊
ငါနောက်ကျောရှိသွားပါဘယ်တော့မှသေချာဘို့ကိုသိ: ဒါဟာငါကွဲပြားခြားနားသောလူ (ထိုညစာစားပွဲ၌ဥပမာ) ရမ်းပြီးသောအခါမှပျော့ flashbacks ရလိမ့်မယ်တဲ့အချက်မှရတယ်။
VR သည်အန္တရာယ်ရှိသောကလေးများဖြစ်သည်။ P ကိုမသုံးပါနဲ့
နိမ့်သစ်ကိုနှိပ်ပါ။ VR porn ကြိုးစားခဲ့သည်။ ငါထွက်ရန်ရှိသည်
ငါမတိုင်ခင်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုဖြတ်ခဲ့ပေမဲ့သိပ်မကြာပါဘူး ငါအတော်လေးအချိန်အတန်ကြာပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါငါကမုန်း၏။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်ကြီးလေးစားမှုရှိခြင်းက၎င်းကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည်။ အခုဒီအမျိုးသမီးတွေကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနဲ့ကြည့်နေတာဟာငါမရောက်နိုင်တဲ့အရာပဲ။ ကျွန်တော့် ဦး နှောက်နဲ့သိပ်မကောင်းဘူး ငါ့ရဲ့စွဲလမ်းမှုကြောင့်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ပုံမှန်စဉ်းစားလို့မရဘူး။ ကျွန်ုပ်၏စွဲလမ်းမှုကြောင့်ကျွန်ုပ်၏လိင်ဘဝသည်လည်းကျဆင်းနေသည်။ ငါ PMO ကိုတစ်ပတ်တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်ရူးသွပ်နေမည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းကိုကျွန်ုပ်အားခံစားမှုတစ်ခုဟုခေါ်ဆိုရန်လုံလောက်သည်။
ငါမနေ့ကအသစ်တစ်ခုကိုနိမ့်ကိုနှိပ်ပါ VR Porn ကိုကြိုးစားပြီး၊ ငါ့ကိုဒီ shit နောက်တဖန်ဘယ်လောက်အန္တရာယ်ရှိနားလည်သဘောပေါက်စေ။ ငါရပ်တန့်ဖို့လိုတယ် ငါရပ်ရန်ရှိသည်။ ထွက်ရှိလူတိုင်းကံကောင်းပါစေ။
VR porn သုတေသီများက 2017 စက္ကူကြောင်းသတင်းပေးပို့,
လူအများစုအတွက် VR ညစ်ညမ်းမှုအတွေ့အကြုံ၏အလားအလာသည်ပြီးပြည့်စုံသောလိင်ဆက်ဆံမှုအတွေ့အကြုံကိုတံခါးဖွင့်ပေးခဲ့သည် - အစစ်အမှန်ကမ္ဘာတွင်မည်သူမျှမလိုက်နိုင်သောမြင်ကွင်း။ အခြားသူများအတွက်၎င်းသည်နယ်နိမိတ်ကိုတွန်းအားပေးရန်ရည်ရွယ်သည်၊ မကြာခဏအလွန်အမင်းရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနှင့်အကြမ်းဖက်သည့်ပုံရိပ်များကိုအသုံးပြုသည်။ လက်ရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေဆိုင်ရာသုတေသန မှနေ၍ ဤအကြောင်းအရာနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှစွဲလမ်းစေနိုင်ပြီးပိုမိုအစွန်းရောက်နိုင်သည်။
VR“ Empathy Machine” ဆိုတာဘာလဲ။ Virtual Reality Pornography တွင်မိမိကိုယ်ကိုနှင့်အခြားသူများ၏အမြင် (၂၀၂၀)“ VR ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်ရင်းနှီးသောလိင်ဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများ၏ထင်ယောင်ထင်မှားများကိုထုတ်ဖော်ရန်အစွမ်းထက်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပုံရသည်။ ”
သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတွေ့ရှိခဲ့ကြပြီ VR porn (2017) နှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်အမင်းစိုးရိမ်သောအရာ
"တစ်ဦးက virtual reality လေ့လာမှု: ညစ်ညမ်းများ၏အမြင်အပေါ်နှစ်မြှုပ်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု"(2018)
"virtual reality အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းများ၏အနာဂတ်လား?"(BBC, သြဂုတ် 2016)
အလွန်ကောင်းမွန်သော (သို့သော် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ) ဆောင်းပါး- ကျွန်တော် VR porn ကို စမ်းကြည့်ပြီး၊ ကျွန်တော်တို့ F**KED ပါ။
'' Black ကကြေးမုံရဲ့ပထမဦးစွာ Porn အပိုင်းအတွင်းပိုင်း: 'ဒါဟာလိင်ကစားကွင်းရဲ့' ' (2019)
ဂြိုလ်သားများနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှသည်ကုမ္ပဏီကြီးများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းအထိ - ထူးဆန်းသော fetishes များကိုလျှို့ဝှက်စွာဖြည့်ဆည်းရန် virtual reality ကိုအသုံးပြုမည်လား။ (2017)
“ virtual reality အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာရဲ့အနာဂတ်လား” (ဘီဘီစီ)